Toy izao no fampiasan'ny zokiolona ny iPad (Humor) | Vaovao IPhone
Toy izany no fampiasan'ny zokiolona ny iPad (Hehy)
Hain'ireo loholona ao an-trano ve ny mitantana na mampiasa ny takelaka Apple? Amin'ity sary alemà ity, izay niteraka hatezerana lehibe tao amin'ny YouTube ary efa niparitaka be tamin'ny internet, dia afaka mahita zafikely vavy miara-misakafo amin'ny raibeny isika. Nanontany ny dadabeny ilay tovovavy hoe manao ahoana amin'ny iPad nomeny azy tamin'ny andro nahaterahany ary raha hainy ny mampiasa ireo rindranasa rehetra ireo. «Fampiharana inona?», Hoy ny navalin'ny raibe.
Akory ny hagagan'ilay tovovavy rehefa niseho niaraka tamin'ny iPad ny raibeny, ary nampiasaina ho takelaka fanapahana mba hanapaka ireo fangaro amin'ny sakafo nomanin'izy ireo. Ary toy ny takelaka fanapahana, alefaso amin'ny antsy ny antsy amin'ny iPad mba hianjera ao anaty vilany daholo ny zava-drehetra ary aorian'izay, apetraho eo ambanin'ny paompy ilay takelaka hanadiovana azy ary hiditra ao anaty vilia fanasana.
Toa tsy nahomby tamin'ny mpihaino rehetra ny doka nataon'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Toy izany no fampiasan'ny zokiolona ny iPad (Hehy)
Sary pasipaoro, avy amin'ny iPhone-nao izao
Sparrow no fampiharana tsara indrindra hitantanana ny kaonty mailakao